उम्मेद्वार - रवीन्द्र मिश्र
रवीन्द्र मिश्र विवेकशील साझा पार्टी काठमाडौँ १
रवीन्द्र मिश्रको जन्म वि.सं. २०२४ मा काठमाडौंमा भएको हो । राजनीतिमा लाग्नुअघि मिश्रले पत्रकारिता गर्नु हुन्थ्यो । राजनीतिक नेतासँग खरो प्रश्न सोध्ने मिश्र बीबीसी नेपाली सेवा लण्डनका पूर्व निर्देशक हुनुहुन्छ । उहाँले स्तम्भकार पनि हुनुहुन्छ । उहाँले विभिन्न नेपाली पत्रपत्रिकामा लेख रचना प्रकाशन गर्नुभएको छ । उहाँले नेपाल साप्ताहिकमा विभिन्न कालखण्डमा छद्म नाम प्रयोग गरेर छपाइएका समसामयिक स्तम्भ तथा लेखहरूको सङ्गालो भूमध्य रेखा नामको पुस्तक प्रकाशित भएको छ । त्यस पुस्तकबाट प्राप्तहुने रोयल्टी रकम मिश्रले चितवनस्थित राउटेहरूलाई सहयोग गर्ने कुरा पुस्तक विमोचन समारोहमा गराएका थिए । पेशाले उहाँ पत्रकार थिए । उहाँ बीबीसी नेपाली सेवाका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । उहाँले बीबीसीमा काम गर्दा बीबीसीका महत्वपूर्ण अंग्रेजी विभाग, द वल्र्ड टुडे, न्युज आवर र समाचार महाशाखामा काम गर्नुभएको थियो । मिश्रले पाकिस्तानमा द न्युज इन्टरन्यासनल दैनिकको समाचार शाखामा पनि काम गर्नुभएको थियो । वि.सं. २०७३ फागून १७ मा बीबीसी नेपाली सेवाबाट राजिनामा दिएर उहाँ राजनीतिमा लाग्नुभएको हो । नेपालको राजनीति सुधार्न भन्दै मिश्रले बीबीसीको जागिर छोडेर राजनीतिमा होमिनु भएको हो । उहाँले बीबीसी नेपाली सेवाबाट राजिनामा दिनुभएपछि साझा पार्टी खोल्नु भएको थियो । उहाँ नेतृत्वको साझा पार्टीले २०७४ को स्थानीय तहको चुनावमा पनि सहभागिता जनाएको थियो । उहाँहरुको चुनाव चिन्ह तराजु रहेको थियो । स्थानीय तहको चुनावमा अपेक्षित मतपरिणाम आउन नसकेपछि उज्वल थापा नेतृत्वको पार्टी विवेकशील नेपाली पार्टी र साझा पार्टी एकीकरण भएको थियो । एकीकरणपछि उहाँहरुको पार्टीको नाम विवेकशील साझा पार्टी रहेको छ । यसै विवेकशील साझा पार्टीको मिश्र संयोजक हुनुहुन्छ । उहाँले यसै पार्टीबाट काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ । मिश्र कल्याणकारी संस्था हेल्प नेपाल नेटवर्क, नेपालका लागि महिनाको सय रूपैयाँ कोष (www.helpnepal.net) का संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
सिराहा ३ (क) पूरा विवरण
प्रचण्डकी बुहारी बिना मगरले भोट हालिन्